Media sosialy ho an'ny fanombohana: fanombohana, fizarana, buzz ary vola | Martech Zone
Media sosialy ho an'ny fanombohana: fanombohana, fizarana, buzz ary vola
Alatsinainy, 15 Jona, 2015 Douglas Karr
Nizara lisitra feno feno izahay Tranokala 40+ hampiroborobo ny fanombohanao tokony hijerenao (ary hizaha) rehefa mikasa ny handefa ny fanombohana anao manokana ianao.
Mbola betsaka ny buzz manodidina ny fampiasana media sosialy hivoahana amin'ny fanombohana anao. Ary mbola misy ihany ny hevitra tena mampiala voly sy tena izy amin'ny fampiasana azy. izany infographic avy any Udemy mampiseho ny fomba ahafahanao - amin'ny maha-fanombohana anao mampiasa marketing ara-tsosialy ho fitaovana hampitomboana ny orinasanao ary maninona ianao no mety te hampiasa vola amin'ny fampiofanana amin'ny haino aman-jery sosialy hahazoana haingana.
Ny lakile iray tsy hita eto dia mialoha ny fandefasana. Raha hivarotra ny fanombohana amin'ny alàlan'ny media sosialy ianao dia tena hamporisika anao hanana programa alohan'ny fanombohana miaraka amin'ireo mpampiasa beta mba hanampiana ny fananganana buzz manodidina ny fanombohana ary koa ny fahazoana valiny tsy mampino.
Efa niasa izahay CircuPress herintaona izao ary mbola fanombohana tanora izy na eo aza ny fametrahana 1,500 mahery. Ny valiny omenay avy amin'ny mpampiasa dia mahatalanjona ary manohy manatsara ny serivisy izahay, manamboatra ny fotodrafitrasa ary miomana amin'ny fanombohana lehibe kokoa. Na izany aza, tsy handany fotoana sy vola an-taonina amin'ity fandefasana ity izahay mandra-pahafantatra fa ny serivisy dia tsara indrindra - momba ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fotodrafitrasa.
Iray amin'ireo lakilena lehibe arahin'izy ireo ny mihaino ny valiny omenao momba ny sehatrao. Matetika izahay mahita fifandraisana eo anelanelan'ny zavatra heverin'ny startup sy ny zavatra ankafizin'ny mpampiasa fa ataon'izy ireo. Ny fifantohana amin'ny tombontsoa omen'ny mpampiasa anao ny valin-kevitr'izy ireo dia fomba tsara iray hanomezana mazava ny marika entinao mamelona.
Ny toro-hevitra farany farany dia ny hahazoana antoka fa manana mpisolovava na programa afiliana hiparitaka ianao, inona ireo antso infographic, teny fipihana. Fiandohana maro no mahita ireo ho zavatra hatao aorinan'ny fandefasana azy, saingy tena manery izahay ny mpanjifanay hanao izany ao anatin'ny fandefasana. Ny fananganana maro amin'ireo fitaovana ireo avy eo dia sarotra, indrindra raha mila ampidirina ao anaty lozisialy fototra ianao.
Tags: Buzzhaino aman-jery sosialy buzzfiovam-po amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialy ho an'ny fanombohanafizarana fanombohanafanombohana fanombohanamarketing marketingUdemy
CommerceHub: Manitatra, Mampiroborobo, manatanteraka ary manafaka
Maninona ianao no mila manatsara ny karatra Swipe anao amin'ny EMV